Xog: Dibadbax ka dhan ah hadalkii Deni oo maanta ka dhacaya Laascaanood | Baahin Media
Xog: Dibadbax ka dhan ah hadalkii Deni oo maanta ka dhacaya Laascaanood
Sida ay ol-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Badweyn Online, waxaa la filayaa in maanta salaada Jimce kaddib dibad bax ka dhaco magaalada Laacaanood.
Dibad baxan ayaa la sheegay in uu daba joogo hadalkii ka soo yeeray Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo sheegay in Somaliland ay kusoo xadgudubtay Puntland.
Waxaa hadalkaas ka jawaabay Wasiirka Biyaha ee Somaliland Saleebaan Cali Koore oo ka soo jeeda gobolka Sool.
Hadaladaas la’is dhaafsaday ayey suurtagal tahay in ay markale collaadi ka dhacdo gobolka Sool gaar ahaan aagga Tukaraq oo ay ciidamada Puntland iyo ciidamada Somaliland isku horfadhiyaan.
Bulshada reer Laascaanood oo u arkay hadalka Deni mid gef ah ayaa la filayaa in ay darenkooda banana bax ku cabiraan.
“Wax iska caadi ah ayey noqotay in hogaamiyeyaasha Puntland ay collaada gobolka Sool ka dhigtaan wax lagu kaambeen gareeyo maalmaha doorashada iyo marka uu madaxweyne waqtigiisa sii dhamaanayo “, waxaa sidaas Badweyn u sheegay mid ka mid ah dhallinyarada dibad baxa soo qaban qaabisay.
“Waxan u sheegeynaa madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland in reer Sool in lagu dul dagaalamo dooneyn oo hadda haystaan nabad ee madaxda maamulkaas yeysan xaalad abuur noqon,” ayuu raaciyey hadalkiisa shaqsiga noo warramay oo codsaday in aan la xusun.
Hase ahaatee, iyada oo ay maamulada Somaliland iyo Puntland ku dagaalamaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, hadana dadka ku dhaqan deegaankaas ma rabaan labada dhinacba oo ay waxa ay doonayaan maamul iyaga u gaar ah.